Ka qaybqaadashada Norwey ee ururada caalamiga ah | Samfunnskunnskap.no
Norwey waxay xubin ka tahay ururo badan oo caalami ah kuwaas oo saameyn ku leh siyaasada noorwiijiga sida Qaramada midoobey (FN), NATO iyo EØS.
Qaramada midoobay (QM)
Qaramada midoobey waa urur caalami ah oo la aasaasey 24 oktoobar ee 1945. Qaramada midoobey waxay ka shaqeeyaan nabadgelyada iyo ammaanka caalamiga ah, waana goob wadahadal oo ay ku kulmaan dalalka kala duwan ee aduunka. Maanta waxa xubin ka ah Qaramada midoobey 193 dal. Qaramada midoobey waxa kale oo ay ka shaqeysaa sharciyada caalamiga ah, horumarinta dhaqaalaha iyo xuquuqda dadka. Qaramada midoobey waa u muhiim u ah abuurida nabadgelyada. Dalalka xubnaha ka ah ayaa maalgeliya Qaramada midoobey oo siiya caawimo dhaqaale. Qaramada midoobey ma leh awood sharci oo qeexan. Sidaa darteed go’aanka ka soo baxa Qaramada midoobey ma aha mid sharci ahaan qabanaya dalalka xubnaha ka ah.
Ururka Gaashaanbuurta Waqooyiga Atlaantiga (NATO) waa urur isdifaacid oo ay ku bahoobeen 28 dal oo Yurub iyo Waqooyiga Ameerika. Waxa NATO la aasaasey 1949kii. Dalalka xubnaha ka ahi waxay si wadajir ah waajib isugu saareen inay iskaashadaan iyo inay isu dagaalamaan haddii mid amaba qaar ka mid ah uu qabsado dal ama dalal badani.
Heshiiska EØS wuxu ilaaliyaa kala ganacsiga iyo xaaladaha kale ee dhaqaale ee waddamada EØS. Waxa aan raacnaa sidoo kale sharciyada EU-da marka ay joogto xor u socodka badeecadaha, adeegyada, shaqaalaha iyo raasamaalka. Norwey waxa ka dhacay afti-dadweyne oo ku saabsan ka mid noqoshada EU (Midowga yurub) laba jeer (1972 iyo 1994). Labada jeerba waxa ay aqlabiyaddu ka coddeeyeen in ay Norwey ku gasho EU.
Waddamada lagu midabeeyey buluuggu waxa ay xubno ka yihiin EU.
Norwey, Leichtenstein (lagu midabeeyey cagaar) waxa ay kula jiraan waddamada EU wadashaqynta EØS.
Heshiiska Schengen waa heshiis bedelaya kontoroolka xadadka ee wadamada ku heshiisyey kontorool iyaga ka baxsan. Tani waxa ay tahay in loo arko wadamada Schengen sidii goob weyn taas oo qofku dhiibanayo baasaboor ama fiise sharci ah xadka ugu sokeeyey si qofku u soo galo. Marka qofku soo galo goobaha Schengen qofku wuxu u dhoofi karaa si xor ah wadamadaa dhexdooda iyada oo aanu la kulmin wax la weydiinayo oo basaboor ah. (Arrintan waa la bedeli karaa haddii xaaladi timaado gaar ahi, booliiska Norwey waxa ay ku talinayaan in aad sidatid baasaboorkaaga marka aad waddanka ka baxayso.)
Heshiiskan waxa lagu saxeexay Schengen 1985kii Luxembourg. Maanta waxa ku heshiis ah 26 dawladood oo dalalka yurub ah.
Dalalka saxeexay heshiiska Schengen: